Tag: suuq u dhawaanshaha | Martech Zone
Tag: suuq ku dhowaanshaha
Farriinta Daruuraha waxay isku dartaa Fariin macno leh oo loogu talagalay Khibradaha Moobiilka ee Bakhaarka ku jira
Arbacada, Maarso 18, 2015 Douglas Karr
SmartFocus waxay maanta kaga dhawaaqday Shirweynaha Caalamiga ah ee Mobile-ka inay soo bandhigi doonto nalalka ugu horreeya adduunka. Nalalka daldalaalka ah ayaa u oggolaanaya suuq-ku-saleynta ku-saleysan iyada oo aan la is-dhexgalka qalabka adag ama dayactirka. Shirkaduhu waxay kicin karaan farriinta goobta-yar si ay ugu suurtagasho waaya-aragnimada macnaha guud iyadoo la isticmaalayo oo keliya qorshe dabaq ah. Tikniyoolajiyada SmartFocus ee Cloud Cloud waxay siinaysaa suuqgeeyayaasha calaamadaha aragti guud oo ku saabsan macaamiishooda, iyaga oo awood u siinaya inay soo gudbiyaan xitaa isdhexgalka suuq geynta shakhsi ahaaneed oo ay ku jiraan dalabyada duruufaha leh, lacagaha, daacadnimada, iyo dib u eegista.
Farqiga U Dhexeeya Teknolojiyada Suuqgeynta?
Monday, June 15, 2009 Axad, Sebtembar 30, 2012 Douglas Karr
In badan, sannado badan ka hor waxaan falanqeeye ka ahaa Wargeyska. Toddobaad kasta waxaan ka soo ururiyey xogta guud ahaan nidaamkeenna wax-soo-saar iyo soo-saaris waxaanna ka shaqeyn jirey sidii aan u heli lahaa meesha ay jirto waqti ama lacag lagu kaydin karo. Waxay ahayd shaqo dhib badan laakiin waxaan lahaa hogaan wanaagsan iyo tobankii sano ee aan ka shaqeynayay, waxaan yareynay miisaaniyadeena howlgalka sanad walba. Waxay ahayd shaqo aan caadi ahayn oo lagu abaalmariyo. Waxaan shaqsiyan mas'uul ka ahaa miisaaniyad malaayiin doolar ah